Garsoorayaal Cusub Oo Maanta Loo Dhaariyay 14-Degmo Oo Katirsan Gobolka Banaadir – Kalfadhi
Garsoorayaal Cusub Oo Maanta Loo Dhaariyay 14-Degmo Oo Katirsan Gobolka Banaadir
September 13, 2018 September 13, 2018 Kalfadhi
Muqdisho maanta waxaa lagu dhaariyay guddoomiyeyaal iyo garsoorayaal cusub uu magacaabay guddoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka, waxaana garsoorayashan iyo guddoomiyeyaashu ay ka howlgali doonaan 14-degmo oo katirsan 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Madasha dhaarinta waxaa joogay hanti dhowraha qaranka,guddoomiyaha, maxkamadda sare iyo guddoomiyaha Maxkamada Racfaanka Gobolka garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi.
Hanti-dhowraka guud ee qaranka mudane Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye) oo qudbad kooban ka jeediyay goobta ayaa kula dardaarmay mas’uuliyiintaan garsoor ee maanta la dhaariyay inay wax kusoo kordhiyaan hannaanka caddaaladda ee Soomaaliya hadda u qaaday inay wax kaga qabato garsoorka guud ahaan dalka.
Hanti Dhowraha Qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa sheegay isagoo la hadlayay Garsoorayaal cusub ah oo maanta loo dhaariyay xilka inuu ku dabagali doono shaqadooda, taasina ay tahay waajibka saaran xafiiskiisa.
Hanti-dhowraka guud ee qaranka mudane Maxamed Maxamuud Cali (Afgooye) iyo hadal jeedintiisa ku aaddaneyd caddaaladda.
Posted by Kalfadhi on Thursday, September 13, 2018
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay ka go’antahay inay wax kaqabato garsoorka waddanka si meesha looga saaro tabashooyinka ka yimaada bulshada.
Gudoomiyaha Maxkamada sare ee Dalka oo Garsoorayaal cusub dhaariyay
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa sheegay in Garsoorka dalka isbeddel guud lagu samaynayo si meesha looga saaro eedaha inta badan loo jeediyo hannaanka caddaaladda dalka.
Horraanti bishaan ayay ahayd marki uu guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed dib u habeyn ku sameeyey garsoorayaasha maxkamadaha darajada 1-aad iyo 2-aad ee gobolka Banaadir, isagoo dalacsiin iyo isku beddel ku sameeyey qaar kamid ah garsoorayaasha.
Guddiga Joogtada Golaha Shacabka Oo Kulankii 41-aad ku yeeshay Muqdisho